Rocky Linux 8.4 inowanikwa. Imwe nzira yekugovera kuCentOS | Linux Vakapindwa muropa
Chikumi 21 yakavhurwa imwe yedzimwe nzira zhinji kuCentOS dzakabuda mushure meRed Hat yakafunga kushandura kugovera uku kuita mhando ye beta yeRHEL. Chinhu chinonakidza nezve Rocky Linux ndechekuti maneja wayo haasi mumwe kunze kwaGregory Kurtzer, mubatsiri-weprojekiti ye CentOS chirongwa.
1 Rocky Linux 8.4 inowanikwa. Dhawunirodha isati yapera
2 Sangano kutsigira chirongwa ichi
3 Iyo Rocky Linux chirongwa
Rocky Linux 8.4 inowanikwa. Dhawunirodha isati yapera
Kugoverwa kutsva, kwakavakwa kubva kuRed Hat Enterprise Linux 8.4 kodhi kodhi, iri kunyanyo kufarirwa. Zvinoenderana naKurtzer pa Linkedin:
Mumaawa gumi nemaviri chete, takaverenga zvingangoita zviuru gumi zvekuburitswa kweiyo Rocky Linux GA yekuisa midhiya kubva kwedu Tier12 girazi. Kana tikaburitsa kuverenga kuti tibatanidze zvimwe zvinyorwa zvedu, isu tinogona kunge tichidarika kanokwana ka0 kana akawanda (kana kutonyanya kuwanda)!
Kune mitsara mizhinji yevanhu nemasangano ayo atove kutsiva masisitimu eCentOS (uye kunyangwe mamwe maLinux akagoverwa) neRocky. Iwo midhiya ari kufungidzira uye vanoongorora bhizinesi zvakare pachavo vanosimbisa iyo Rocky Linux pro
iyo inogona kuve inonyanya kushandiswa sisitimu yekushandisa yeLinux mune bhizinesi uye gore!
Nhau dzakanaka dzevaSpanish ndedzekuti vane girazi remuno, iro rinoderedza nguva yekurodha pasi. Iyo yeSpain gore rinopa sevhisi Stackscale, iyo parizvino ine matatu data nzvimbo muMadrid uye maviri muAmsterdam, yakava imwe yekutanga yeruzhinji Rocky Linux magirazi muSpain neNetherlands. Kutsigira kugovera kutsva Stackscale yakapa magirazi maviri kuchirongwa, imwe mune yeruzhinji Stackscale girazi muMadrid uye imwe mugirazi reveruzhinji reStackscale Amsterdam.
Sangano kutsigira chirongwa ichi
Kunge mamwe akawanda akavhurwa sosi mapurojekiti, Rocky Linux inogoneswa nenheyo inoona kuti kugovera kutsva kunogara kuripo kunharaunda. Ukuwo, Kurtzer akagadzira kambani kuti ipe rutsigiro rwekubhadhara kune vatengi muzvikamu zvakaita sekudzivirirwa nehurumende, vezvenhau, mishonga, mishonga yemhando yepamusoro (HPC), pamwe nesainzi.
Mushure mekuvandudza kwemwedzi minomwe, Rocky Linux inowanikwa yeX7_86 uye ARM64 (aarch64) yekuvakisa Hardware mune dzakasiyana ISOs. Inogona zvakare kuwanikwa pane Google Cloud uye Amazon Web Services mapuratifomu. Zvakare mifananidzo yemidziyo muDocker.hub uye Quay.io
Iyo Rocky Linux chirongwa
Rocky linux inharaunda nharaunda inoshanda sisitimu yakagadzirirwa kuva 100% inoenderana nekutungamira kweLinux kugovera bhizinesi (Red Hat Enterprise Linux) kare iro basa rakazadzikiswa neCentOS, asi, Red Hat Akasarudza shandura iyo ive yekuyedza vhezheni yeRHEL.
Pakaberekwa chirongwa ichi, CentOS yakashanda senge yekumusoro-pasi kuvaka kweayo ekumusoro mupiki (iyo yaisanganisira zvigamba uye zvigadziriso mushure meye kumusoro kwerwizi mupi). Mushure mekuchinja kwakava pasi-kumusoro kuvaka (kuyedza patches uye kugadzirisa zvisati zvaiswa mune wezasi-kumusoro mupi). Kuita kuti zvinhu zviwedzere kuoma, rutsigiro rweCentOS Linux 8 rwapfupikiswa, kubva Chivabvu 31, 2029 kusvika Zvita 31, 2021.
Izvi zvakakonzera kusagadzikana pakati pevashandisi vekambani vanosanganisira makambani makuru senge Disney, GoDaddy, Rackspace, Toyota, Verizon, uye vangangoita vese vanopa webhu vanopa.
Rocky Linux inozoita seyepamusoro-pasi muunganidzwa ichiwedzera shanduko mushure meRed Hat.
Zvinosuruvarisa kuti handina kuwana runyorwa rwe software yakasanganisirwa, asi, inofanirwa kutariswa kuti sezvo kuri kugoverwa kwakanangidzirwa pamusika wemakambani, chinotarisa zvakanyanya kugadzikana pane izvozvi.
Zvakanyanyisa kukurumidza kutaurira kana iko kwekutanga kuda kuziva kuchakanganisa kuita zvachose mushandisi base. Kune dzimwe nzira dzinotarisira kutora tsvimbo yeCentOS. Alma Linux yakavhurwa munaKurume wegore rino, inofambiswa neCloudLinux, yakabhadharwa kugoverwa kwewebhu kubata masevhisi. Kune rimwe divi, Oracle uye SUSE zvakare vakagadzira nzira dzekukwezva vatengi vasingagutsikane. Uye, Red Hat pachayo yakawedzera chiyero chemarezinesi ayo emahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Rocky Linux 8.4 inowanikwa. Imwe nzira yekugovera kuCentOS
Nyowani vhezheni yeOpera inowanikwa yeLinux, Windows uye Mac